Ny dikan'ny anarana Xenia. Ny misterin'ny Xenia
Inona ny anaran'ny Xenia?
Ny anaran'i Xenia dia manomboka amin'ny "Xe" maranitra sy mazava ary mifarana amin'ny "toe-tsaina malefaka". Ankizivavy iray manana anarana io dia mety ho maivana sy mahaliana, saingy hanafina ny fahamendrehany noho ny fahamaotinana voajanahary.
Xenia, nadika tamin'ny teny grika, midika hoe "vahiny", "vahiny", "vahiny", "vahiny".
Ny niandohan'ny anarana Xenia:
Misy dikan-teny roa amin'ny fiandohan'io anarana io.
Araka ny dikan-teny voalohany, ny anarana Xenia dia avy amin'ny teny grika hoe "Xenia", midika hoe "vahiny", "vahiny". Ao Rosia, noho ny fahazarana mampiditra zanapeo iray amin'ny teny manomboka amin'ny konsony roa, dia niova ho Aksinya ny anarana.
Ny dikan-teny faharoa dia milaza fa ny Xenia dia ambany kokoa amin'ny anarana grika Polixenia, midika hoe "tia mandray vahiny".
Ny toetra sy ny fandikana ny anaran'ny Xenia:
Hatramin'ny fahazazan'i Ksusha dia tia tia milalao saribakoly. Ny fanomezam-pahasoavana tsara indrindra ho azy dia ho toy ny zavatra toy ny fiainam-pianakaviana isan-karazany - lovia, trano poketra, kamboty. Ny hatsaram-panahy, ny fahamoram-pony ary ny fahatsapana ao aminy dia napetraka hatramin'ny fahaterahana. Ksenia dia olona tso-po, misokatra ary marina. Voafitaka mora izy, matoky tena. Amin'ny maha-olona azy, Xenia dia altruist, vonona ny hiady ho an'ny havan-tiana. Xenia dia zaza mamy sy tony ary mankatò.
Mianatra tsara aho any am-pianarana. Tena mihetsiketsika, mihaino tsara ary marina. Izy no mitondra ny baiko rehetra "tsara". Ny mpampianatra dia midera azy noho ny fahazotoany, ny Ksyusha dia tia ny namany, tsy miraharaha ny fifanoherana izy.
Ny ankizivavy iray misy an'io anarana io dia mety amin'ny asa rehetra mitaky fahafaha-mamantatra tranga maro samihafa. Avy amin'i Xenia dia nahazo fanadihadiana tena tsara, mpisolovava, librarians, mpampianatra. Raha i Ksyusha dia mandray anjara amin'ny fitantanana tetikasa, dia azo inoana fa ho tratra izy, ary amin'ny kalitao sy ny fotoana. Mba hanaovana izany, dia hanampy ny mpiasa ao amin'ny asa amin'ny andraikitry ny tetikasa izy, ary indraindray, afaka manomboka miasa izy ireo fa tsy ireo.
Amin'ny mpiara-miasa dia mifidy lehilahy mahay sy matoky an'i Ksenia. Satria i Xenia dia malemy hatramin'ny fahazazany, dia tena manan-danja tokoa izy amin'ny fifandraisana miorina tsara, ary amin'ny fanambadiana - ny tsy fivadihana sy ny fahafahana hanambara ny maha-vehivavy azy. Tena mahay mandanjalanja amin'ny lehilahy izy, mahavita mandainga amin'ny tenin'ny havan-tiana.
Ho an'ny olon-dehibe Ksenia, ny famoronana fianakaviana dia laharam-pahamehana. Izy - renim-pianakaviana mahafinaritra, afaka manadio tanteraka ny fitiavana sy ny fikarakarana ny vady aman-janany.
Ao amin'ny vadin'i Xenia, lehilahy iray matanjaka ara-panahy matanjaka, manana lojika mahomby, dia mifanentana tsara. Izy dia tokony ho tia tena be fitiavana, fahatakarana tsara ny fanirian'ny vehivavy. Ho an'i Xenia ho an'ny vadiny dia mpanampy iray ao amin'ny raharahany, toeram-ponenana mahatoky, mila mahatsapa fifandraisana ara-panahy amin'ny olom-boafidiny izy. Tena nanolo-tena ho an'ny malalany izy.
Ao amin'ny firaisana, vehivavy tsy misy kompania ny vehivavy manana an'io anarana io, tia fanatanjahan-tena sy fanandramana. Te-hanjaka eo am-pandriana izy, ary matetika dia mahery setra, ao amin'ny vondrona no tsy mahita afa-tsy zavatra mahafinaritra. Raha liana amin'ny firaisana ny lehilahy iray, dia mahafinaritra i Xenia noho ny anjara asan'ny mpifankatia.
Ny fanambadiana voalohany ao Xenia dia matetika no tsy faly ary mifarana amin'ny fisaraham-panambadiana. Ary satria ity vehivavy ity dia tsy te hanova ny mpiara-miasa aminy, amin'ny toe-javatra mitovitovy amin'izany, dia mihena ny fahaketrahana. Mba hialana amin'io fanjakana io dia mila manomboka fifandraisana vaovao amin'ny lehilahy iray be fiahiana sy manam-paharetana izy, tsy vitan'ny hoe "mandray" fotsiny, fa "manome" izany koa.
Zavatra mahaliana momba ny anaran'i Xenia:
Ao amin'ny ortodoksa, ny anaran'ny Saint Xenia ao Petersburg. Araka ny voalazan'ny angano dia namoy ny vadiny i Xenia, ary taorian'izay, rehefa avy nanambara fa nivadika taminy ny fanahin'ny maty, dia namidiny ny fananany rehetra ary nanomboka nirenireny izy, nanampy ireo marary, mahantra, kamboty ary naminavina ny ho avy, izay heverina ho voatahy.
Ny anarana Xenia dia tsy malaza, matetika hita any amin'ny zazavavy an-drenivohitra.
Mifanohitra amin'i Xenia, ny endriky ny endriny - Oksana, dia malaza ao Okraina.
Anarana Xenia amin'ny fiteny samihafa:
Ny anaran'ny Xenia amin'ny teny anglisy: Xenia (Xenia)
Anarana amin'ny teny sinoa: 克谢尼娅 (Ke-se-no-I)
Xenia amin'ny teny japoney: ク セ ニ ヤ (Cusenia)
Xenia amin'ny teny espaniola: Xenia (Xenia)
Anarana amin'ny anaran'i Xenia amin'ny teny alemà: Xenia (Ksenia)
Ny anaran'ny Xenia amin'ny teny poloney: Ksenia (Xenia)
Xenia amin'ny teny Ukrainian: Xenia (Xenia)
Ny Xenia Xenia Xenia, Xenia, Aksyukh, Aksyusha, Asya, Xenia, Xenia, Xen, Xenius, Senyura, Aksya, Aksyunya Ksenia, Ksyunya, Xunya, Ksyushenka, Xenia, Xyura, Ksiuta, Senya, Sena, Ksyusha, Aksya, Aksyunya, Ksyura, Ksiuta, Ksyusha, Aksyuta, Xenia, Xenia
Ny lokon'ny anarana Xenia : volom-bolafotsy
Ny Xenia Stone : chalcedony
Nicky amin'ny anarana Xenia / Ksusha : Ksyushka, Xu, XU, Baby, Mouse, Bunny, Xenia, Xenon, Xenon, Xerol
Zava-dehibe izany: antony 5 antony ilainao handroahana ny taloha!
Inona ny anaran'i Fedor?
Iza ny anaran'i Irina?
Iza ny anaran'i Cyril?
Fomba ahoana no hampijanonana ny ho faty?
Ahoana no hananganana karipetra eny amin'ny rindrina?
Ampakarina antsoina hoe calla
Comedy momba ny sekoly sy ny zatovo
Ny fanotran-tena dia mitebiteby ao an-trano ho an'ireo vao manomboka - ny fomba hisorohana ny fahadisoam-panantenana
Ny fahatsapan'ny vatana any ivelany
Ahoana no hamehezana ny sombin-koditra eo amin'ny akanjo?
Caucasian frostbite ho an'ny fatiantoka
Saripika misy kirigami
21 boky izay manova tanteraka ny fomba fijerinao
Ankizy - mitombo ao an-trano
Foam ny fanasana
Charlize Theron nanangona ireo mpankafy tamin'ny endrika mena tamin'ny toerana